English Premier League - Experience Best News from Nepal
English Premier League बाट
निकै कमजोर प्रिमिएर लिग सुरुवात गरेका युनाइटेडका प्रशिक्षकको भविष्य के ?
म्यानचेस्टर युनाइटेड प्रशिक्षक ओले गुनार सोल्क्सायरको युनाइटेडमा रहने भविष्य तय भएको एक रिपोर्टले जनाएको छ । यस सिजन प्रिमिएर लिगमा निकै कमजोर पदर्शन देखाएको युनाइटेडले आठ खेलबाट मात्र ९ अंक बटुल्न सफल भएको छ, यस्तैमा प्रशिक्षक सोल्क्सायर अर्को साता...
टोटेन्ह्यमका सनको नापोली जाने योजना
दक्षिण कोरियाका हिउङ मिन सन टोटनह्यामका महत्वपूर्ण सदस्य मध्ये एक हुन् तर, उनले भविश्यमा इटालियन क्लब नापोली जान सक्ने उनको एजेन्टले बताएका छन् । २०१५ मा बार्यन लिभरकुशनबाट टोटनह्याम आएका सनले आफूलाई इंग्लिस प्रिमियर लिगका उत्कृष्ट स्ट्राइकर मध्ये एकका रुपमा...
आर्सनल र युनाइटेडको भिडन्त आज !!
७ औ चरणको इन्ग्लिश प्रिमिएर लिग फुटबल लिग खेल अन्तर्गत आज राति अन्तिम खेल आर्सनल र म्यानचेस्टर युनाइटेड भिड्दै छन् । यूरोपा लिगमा छनोट यी दुई टोलि आज राति युनाइटेडको ओल्ड ट्राफर्डमा भिड्दै छन् । आजको जित आर्सनलका निम्ति...
प्रिमिएर लिगमा आज ८ भिडन्त हुदै !! क-कसको खेल आज हेर्नुहोस विवरण !!
इंग्लिश प्रिमिएर लिग फुटबलको ७ औ चरणको खेल आजबाट सुरु हुदै छन् । आज ठुला साना गरि ८ खेल हुने भएको छ भने एक खेल भोली राती र अन्तिम खेल मंगलबार हुनेछ । आजको पहिलो खेल शिर्ष स्थानमा रहेको लिभरपूल...
१८ मिनेटमा नै सिटीको ५ गोलको अग्रता !!
प्रिमिएर लिग खेल विजेता म्यानचेस्टर सिटी विरुद्ध वार्टफर्डको खेलमा सिटीले २० मिनेट कै अन्तरालमा ५ गोलको अग्रता लियो । पहिलो हाफको पहिलो मिनेटमा नै सिटीका डेभिड सिल्भाले सिटीका निम्ति खाता खोलेका थिए । त्यस्तै ७ औ मिनेटमा अगेरो, १२...
भिएआरले खोस्यो २ गोल !! लेस्टरको घरेलु मैदानमा स्पर्सको हार !!
जारी प्रिमिएर लिग फुटबल अन्तर्गत आज भएको लेस्टर सिटी विरुद्ध टोटनह्याम हट्सपुरको खेलमा लेस्टरले आफ्नो घरेलु मैदानमा २-१ को जित निकालेको छ । छैटौ चरणको उक्त खेलमा भीए आरले २ ओटा गोल अघोसित गरेको थियो भने लेस्टरको किंग्स पावर...
आर्सनलले खेल्यो वार्टफर्डसंग ड्र !!
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सनल र वाटफोर्डले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । आइतबार राति भएको खेलमा आर्सनल वाटफोर्डसँग २-२ गोलको बराबरी खेलको हो । २-० गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्सनलले अंक बाँडेको हो । आर्सनलका लागि दुबै गोल...
घरेलु मैदानमा लिभरपूलको कम्ब्याक !!
प्रिमिएर लिग प्रारम्भ संगै ५ औ साताको पहिलो खेल लिभरपूल विरुद्ध न्यु कासल युनाइटेडमा लिभरपूलले घरेलु मैदान एनफिल्डमा कम्ब्याक जित निकालेको छ । आफ्नै घरेलु मैदानमा भएको उक्त खेलमा विपक्षी न्यु कासल युनाइटेडका विलेम्सले पहिलो ७ औ मिनेटमा नै...
बलियो टोटनह्याम माथि न्यु कासल युनाइटेडको सानदार जित !!
म्यानचेस्टर सिटीलाई उसकै घरेलु मैदानमा २ -२ ड्र खेल्दै यस साता प्रिमिएर लिग तेश्रो साताको खेलमा प्रवेश गरेको टोटनह्याम हट्सपुर न्यु कासल युनाइटेडसंग आफ्नै घरेलु मैदान टोटनह्याम हट्सपुर स्टेडियममा ०-१ गोलले पराजित भएको छ । न्यु कासलका निम्ति नव...
कसरी रास्फर्ड युनाइटेडमा रोनाल्डो बन्दै छन् !!
म्यानचेस्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक ओले गुनार सोल्क्सारले युनाइटेड मार्फत रोमेलु लुकाकु गए पश्चात रास्फर्डलाई प्रमुख प्राथमिकता दिदै आइरहेका छन् । लुकाकुको इन्टर मिलान ट्रान्सफर पश्चात प्रथम स्ट्राइकरको रोजाइमा रास्फर्ड पर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत रुपमा नै रास्फर्डको प्रशिक्षणमा गुनार लागिरहेका...
१प्रधानमन्त्री भन्छन्, आँखा खोले देखिन्छ, खै कहाँ छ द्रुत विकास ?
२आजको राशिफल : कात्तिक १ गते, शुक्रबार
३पर्यटक वृद्धिदरमा नेपाल एसियामै पहिलो
४शारीरिक सम्बन्ध राखिसकेपछि किन सुत्छन् पुरुष ?
५रोनाल्डोको इन्स्टाग्रामको कमाई ३८ मिलियन, मेस्सीको कति ?
६मोटरसाइकल चालकहरुले ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, जान्नुपर्ने छ यी कुरा !!
७क्रिकेट च्याम्पियनले पाउनेछ ७ लाख पुरस्कार !!
९आज बुधबारको राशिफल पढ्नुहोस!!
१०लोकसेवा पहिलो पटक ठूलो संख्यामा उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापन आह्वान
११भेटियो कट्रिनाको डुब्लिकेट, वलिउडमा नयाँ कट्रिना भाइरल !!
१२मेस्सी कि रोनाल्डो ? मौरिन्होले दिए प्रतिक्रिया !!
१३काठमाडौंमै जम्मा १५ हजार आनामै जग्गा ?
१४आज मंगलबारको दिन, तपाइको आजको दिनको कसरी वित्छ !! हेर्नुहोस राशिफल
१५धुपौरेको उत्साहामा अनमोलको दौड !!
१६किसमय प्रियंका आयुषमानको लभ लाइफ !!
१७तपाईं जन्मेको बार कुन हो ? यी बार जन्मिएकाको हुन्छ प्रेम विवाह
१८आज सोमबार, आजको तपाइको दिन कसरी बित्छ, पढ्नुहोस आजको राशिफल !!
१९निकै कमजोर प्रिमिएर लिग सुरुवात गरेका युनाइटेडका प्रशिक्षकको भविष्य के ?
२०मेस्सी र अगेरो राष्ट्रिय टिममा फर्किने बारे यसो भन्छन अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक !!